I-QR Code Builder: Indlela Yokuklama Nokuphatha Amakhodi E-QR Amahle Edijithali noma Ukuphrinta | Martech Zone
Elinye lamakhasimende ethu linohlu lwamakhasimende angaphezu kuka-100,000 elilethe kuwo kodwa alinawo amakheli e-imeyili okuxhumana nawo. Sikwazile ukwenza isithasiselo se-imeyili esifaniswe ngempumelelo (ngegama nekheli leposi) futhi siqale uhambo lokwamukela olube yimpumelelo. Amanye amakhasimende angama-60,000 esinawo ukuthumela iposikhadi ngolwazi lokwethulwa komkhiqizo omusha.
Ukushayela ukusebenza komkhankaso, sifaka a Ikhodi ye-QR enokulandelela kwe-UTM kuyo ukuze sikwazi ukuqapha inani labavakashi, ababhalisiwe, nabaguquleli abavela kumkhankaso we-imeyili oqondile. Ekuqaleni, bengicabanga ukuthi lokhu kuzoba yinqubo elula, kodwa ukwengeza ikhodi ye-QR esekwe ivekhtha bekuyinkinga kakhulu ebengiyicabanga. Njengazo zonke ezinye izinselelo, kunesixazululo lapho… I-QR Code Generator.
Kukhona ukusetshenziswa okuningana kwamakhodi e-QR ngaphandle kwe-imeyili eqondile esiyenzayo, ungahlanganisa amakhodi e-QR ku:
Nikeza ngekhodi yekhuphoni noma isaphulelo.
Yakha i-vCard ukuze izivakashi zilande imininingwane yakho yokuxhumana.
Xhumanisa ne-PDF eku-inthanethi.
Vula umsindo, ividiyo noma ukuvakasha kwesithombe ku-inthanethi kusuka kuzimpawu.
Cela isilinganiso noma uqoqe impendulo.
Nikeza ngemenyu engathinteki yendawo yokudlela yakho (lokhu bekudume kakhulu phakathi nobhubhane).
Nikeza ngamakhodi e-QR aqondene nomcimbi wezinto zakho zokuphrinta ezisabalalisiwe.
Okuhle kunakho konke, ungakwazi ukulandelela ukusetshenziswa kwamakhodi akho e-QR bese wengeza Ukulandelela umkhankaso we-analytics kuma-URL futhi. Bengingahlala ngithengiswa ngamakhodi e-QR ngoba abedinga ukuthi ulande uhlelo lokusebenza isikhathi eside, kodwa manje abafundi bekhodi ye-QR bazenzakalela kukho kokubili ama-iPhone nama-Android uma usebenzisa ikhamera. Lokho kubenza babe mnandi ukuhlanganisa noma kuphi lapho abasebenzisi bakho benedivayisi yeselula futhi ufuna ukuxhumana nabo ngedijithali.
Izici ze-QR Code Generator
I-QR Code Generator kungumkhiqizo we I-Bit.ly, enye yezinkundla ezidume kakhulu zokufushanisa i-URL. I-QR Code Generator isisombululo esisodwa sabadayisi, inguqulo ye-Pro ihlanganisa:
Lawula - ungaphatha wonke amakhodi akho e-QR usuka endaweni eyodwa emaphakathi, ehlanganisa ikhono lokulebula nokuphatha ikhodi ngayinye kufolda yayo.
Bambisana - ungangeza amalungu eqembu ngokungena kwawo siqu futhi uhlanganyele nawo ekwakhiweni noma wabelane ngokubika.
umklami - umklami uhlakaniphile, okwenza ukwazi ukuklama Ikhodi ye-QR eyenziwe ngokwezifiso ngokugcwele ehlanganisa umbala, uphawu (ilogo), nokwenza ngokwezifiso ukubizela esenzweni.
Amakhasi okufika - Amakhodi e-QR anamakhasi okuhlala akhelwe ngaphakathi aklanyelwe ukuboniswa kumakhalekhukhwini, ithebhulethi, noma ideskithophu.
I-URL emfishane – inkundla inesifinyezo se-URL esifakiwe ngakho akumele ukhathazeke ngokufushanisa i-URL ngaphambi kokusebenzisa inkundla.
Ama-Analytics - inombolo yokuskena kwekhodi ye-QR ifakiwe kuplathifomu futhi ungathekelisa idatha kufayela le-CSV.
Ababukeli - Ufuna ukusebenzisa ikhodi ye-QR ukuze uphrinte? Akunankinga - ungalanda ikhodi ye-QR ngamafomethi amaningi - okuhlanganisa i-PNG, i-JPG, i-SVG, noma i-EPS (Mnyama nokumhlophe ngaphandle kwemiklamo eyengeziwe).
API - Ufuna ukuhlanganisa ama-API endaweni yakho? Bane-REST API ephelele yalokho!
Imiphumela ye-QR Code Generator
Nansi ikhodi ye-QR engiyakhe emizuzwini embalwa nje yalesi sihloko. Impela, kungenzeka ukuthi ufunda lokhu kudivayisi yeselula ukuze i-URL yangempela ibe ngezansi enkinobho. Kodwa uma ubheke lokhu kudeskithophu, vele ukhombe ifoni yakho kukhodi ye-QR nganoma iyiphi idivayisi futhi uzobona ukuthi ungakwazi ukuvula ngokushesha i-URL yendawo oya kuyo.
Bhalisela Isivivinyo Samahhala Se-QR Code Generator
Ukudalulwa: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana se- I-QR Code Generator kukho kokubili ikhodi ye-QR kanye nesihloko.
Tags: I-Bit.lyklama ikhodi ye-qrmail ngqoiOSiphoneikhodi ye-qrphatha amakhodi we-qrukumaketha amaselulaIzithombehopukuphrintaIkhodi ye-QRUmakhi wekhodi ye-QRUmbala wekhodi ye-QRUmqambi wekhodi ye-QRAmakhodi we-QRikhodi emfushanei-url shortener
I-WordPress: Ukusebenzisa i-jQuery Ukuvula Iwindi Le-LiveChat Ngokuchofoza Isixhumanisi noma Inkinobho Usebenzisa I-Elementor